Enwere m ike ilele ọwa TV na Photocall TV | Androidsis
Ụlọ Ignatius | | gụgharia, Nkuzi
A bịa na ikiri telivishọn na ekwentị mkpanaaka gị, kwa afọ, ngwa ọhụrụ na / ma ọ bụ ibe weebụ na -apụta nke na -enye anyị ohere ime nke a n'ụzọ dị mfe ma dị mfe. Photocall TV bụ webụsaịtị na -enye anyị ohere nweta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọwa TV na -enweghị iji ngwa.
Na mgbakwunye, ọ na -arụ ọrụ na ekwentị mkpanaaka na kọmputa, yabụ anyị nwere ike iji webụsaịtị a kirie telivishọn dị ndụ. Mana Kedu ọwa TV m nwere ike iji Photocall TV kirie? Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata ọwa niile nke Photocall TV na -enye anyị ohere, ana m akpọ gị oku ka ị gaa n'ihu na -agụ akwụkwọ.
2 Ọwa na Photocall TV
2.1 Ọwa mba
2.1.1 Ọwa izugbe
2.1.2 Thematic ọwa
2.1.3 Ọwa kwụụrụ onwe ya
2.1.4 Ọwa ụmụaka
2.1.5 Egwuregwu egwuregwu
2.2 Ọwa mba
2.4 Ọwa redio
Na Androidsis anyị ebipụtala ọtụtụ akụkọ ebe anyị na -ekwu maka ya Igwe onyonyo foto, ibe weebụ nke na -enye anyị ohere ịnweta ya ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọwa telivishọn sitere n'akụkụ ụwa niile, ọ bụghị naanị na Spain.
A na -enweta ego webụsaịtị ahụ dabere na mgbasa ozi, mgbasa ozi mgbe ụfọdụ na -emebiga ihe ókè ma gosipụta ya na ihuenyo zuru oke nke akwadoro ya. jiri ihe nchọgharị nwere ihe mkpọchi mgbasa ozi.
N'adịghị ka ngwa ndị ọzọ rutere na Storelọ Ahịa Play ma ọ bụ na mpụga ya n'afọ ndị na -adịbeghị anya wee kwụsị, Photocall TV na -eji akara ngosi nke ọwa na -agbasa ọdịnaya ha na ịntanetị, yabụ njikọ na -arụ ọrụ mgbe niile.
Dịka m kwuworo, anyị nwere ike ịhụ ọwa telivishọn sitere n'akụkụ ụwa niile. Nke kachasị, n'ọtụtụ oge, mgbe ọdịnaya a na -agbasa abụghị ihe nkiri ma ọ bụ usoro, anyị nwere ike nweta ọdịnaya ahụ ọ dịghị mkpa iji VPN nke na -etinye IP anyị na mba ewepụtara.
Nke a bụ n'ihi ikike mgbasa ozi ihe nkiri na usoro, ikike nke ahụ ha na -ejedebere n'otu mba ọ bụghị ụwa niile. Ozugbo anyị matara ihe Photocall TV bụ yana otu o si arụ ọrụ, oge eruola ka anyị chọpụta nke telivishọn enwere ike ịhụ site n'elu ikpo okwu a.
Igwe onyonyo foto Ọ na -enye anyị ohere ịnweta ọwa a na -agbasa n'ihu ọha, ya bụ, otu ọwa anyị nwere ike isi na telivishọn anyị gee na -akwụghị ụgwọ maka ndenye aha. Site n'elu ikpo okwu a, atụla anya ịnweta AXN, Fox, Channel Discovery, Calle 13 na ndị ọzọ.
Ọwa na Photocall TV
Photocall bụ ikpo okwu onye Spaniard mepụtara, yabụ ọdịnaya dị na mbụ bụ ọwa ọha dị na Spain.
N'ime ọwa mba, anyị ga -emerịrị ya kewaa ha n'ụdị dị iche iches, ebe ọ bụ na ọ bụghị ha niile na -enye otu ụdị ọdịnaya.
N'ime ọwa izugbe, anyị na -ahụ La 1, La 2, Antena 5, Telecinco, La Sexa na Cuatro. Ọwa isii a mejupụtara ọtụtụ ndị na -ege telivishọn na Spain.
Ọwa isiokwu ha dị site na Photocall TV dị n'efu site na antenna nke ụlọ ọ bụla na ọtụtụ n'ime ha, ewezuga oge dị ụkọ, na -ejikọ na ọwa telivishọn ndị bụ isi.
Ụfọdụ ọwa isiokwu nke anyị nwere na Photocall TV bụ Neox, Nova, Mega, A3S, Factory Factory, Energy, BeMad, Chi, Nchọpụta Max...
Ọwa kwụụrụ onwe ya
Obodo Spanish ọ bụla, ewezuga dịka obodo Valencia, nwere nke ya ọwa mpaghara, ọdịnaya dị n'asụsụ mpaghara, opekata mpe n'ime ọdịnaya ya, ebe ọ bụ na isi ọrụ nke ọwa ndị a bụ ịkwalite ojiji asụsụ obodo.
N'ime ọwa mpaghara dị na Photocall TV anyị na -ahụ TV3, TeleMadrid, ETB, TVG (Telivishọn Galician), South Ọwa (Telivishọn obodo Andalusian), Aragon TV, ọwa Extremadura, TV Can, La 7TV...
Ọwa ụmụaka nke anyị nwere n'aka Photocall TV bụ Isi y Bokwaa tumadi. Anyị nwekwara ike ịchọta ọwa ndị ọzọ amabeghị ama dịka ụmụaka TV ma ọ bụ Pequería, agbanyeghị ndị na -enye ọdịnaya kacha mma bụ Clan na Boing.
Ọwa egwuregwu dịkwa na Photocall na TDP (Egwuregwu Tele), TV ika, Gol TV… Site na ọwa ndị a, ị nwere ike ịnụ ụtọ ụfọdụ asọmpi egwuregwu dị ka ọ dị na TDP, ebe n'ime ọwa ndị ọzọ, ị nwere ike ịgbaso akụkọ egwuregwu na ọ naghị adịkarị ụtọ ọdịnaya egwuregwu.
Na ngalaba ọwa mba ofesi, Photocall TV na-eme ka anyị nweta ọtụtụ ọwa ọha na-agbasa ikuku n'ikuku n'ọtụtụ mba, ma na United States dị ka Canada, Europe, Latin America na ọbụna ọwa sitere na mba Arab.
Iji nweta ọtụtụ ọwa ndị a, ọ dịghị mkpa iji VPN ọ bụrụhaala na ọdịnaya a na -agbasa bụ nke gị, ọ dabereghị n'ikike mgbasa ozi nke ikpo okwu zụtara.
Nnweta nke Photocall TV na -enye anyị na ọwa ndị a bụ otu nke ahụ dị na ibe weebụ nke ọwa dị iche iche, yabụ àgwà bụ kpọmkwem otu.
Ụfọdụ ọwa nke ikpo okwu a na -eme ka anyị nwee bụ ABC, CBS, CNN, Fox, NBC, BBC, akụkọ Sky, akụkọ euro, RT, France 24, TV5 Monde, i24 News, USA Taa, NASA...
N'ihi ọnụọgụ ọwa nke Photocall TV na -enye anyị, chọta nke masịrị anyị ọ nwere ike bụrụ ọrụ na -agwụ ike, ebe ọ bụ na anaghị ahazi ha n'usoro ọ bụla.
Ọ dabara nke ọma, n'elu anyị nwere nweta igwe nchọta, igwe ọchụchọ nke na -enye anyị ohere ịchọta ọwa anyị chọrọ ịhụ ngwa ngwa.
Na ngalaba a anyị na -ahụ usoro isiokwu dị iche iche, nri na egwuregwu, oge efu, ịkụ ọkpọ, ihe egwuregwu dị ka Moto GP, ATP WTA, PGA Tour, NBA TV, NHL, Box Nation, Sky Sports, RedBull TV, Aventure Sports, Horizon Sports,
Na ngalaba Redio, anyị nwere ohere ịnweta isi ụlọ ọrụ redio dị na Spain Onda Cero, SER, RNE, Radio Marca, Kiss FM, Europa FM, Cadena 100, Los 40 na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ ọrụ mpaghara na mpaghara.
Anyị nwekwara ohere nnukwu ụlọ ọrụ redio dị na United States, Europe na Latin America, dịka NBC, BBC, Sky News, NRF (France), VRT (Belgium)… ịkpọ aha kacha mara amara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Kedu ọwa TV m nwere ike iji Photocall TV kirie
Egwuregwu shark 5 kacha mma maka gam akporo
Ngwa ngwa nri ise kachasị mma na gam akporo ka ị mara